Faah faahin ka soo baxeysa kulamo ka dhacay Qardho – SBC
Faah faahin ka soo baxeysa kulamo ka dhacay Qardho
Posted by editor on Apriil 28, 2011 Comments
Qardho- Daqiiqado ka hor waxaa soo xirmay kulan balaaran oo magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar uu kula lahaa madaxweynaha Dowlada Puntland qaar ka mid ah Cuqaasha, Nabadoonada iyo weliba waxgaradka gobolka.
Kulankaasi ayaa waxaa diirada lagu saarayay Arimaha Dar dar gelinta Amniga iyo xasiloonida Puntland iyo weliba arimaha beelo dhowaan ay xurgufi ku dhexmartay gudaha gobolka siiba beelo iyagu wada dega gobolada Karkaar iyo Heyland.
Maxamuud siciid Ciise Hogaama laroor Duqa degmada Qardho oo la hadlay Barnaamijka Xulka wararka ee ka baxa idaacada SBC International ayaa u sheegay in kulankaasi looga wada hadlay arimo aad u badan oo ku saleysneyd xalinta Qilaafaadyada jira iyo ku dadaalista xasiloonida .
Waxa uu intaasi ku daray gudoomiyuhu in meel la isla dhigay dhamaan arimahaasi oo dhan islamarkaana ay isku raaceen, Maamul, Waxgarad iyo weliba shacaba intii goobta fadhiday in gacan adag lagu qabto amaanka sharcigana la marsiiyo wixii dambi ka kalaya xasiloonida dalka .
Madaxweynaha Puntand Dr C/raxmaan Faroole ayaa soo gaaray magaalada Qardho maanta isagoona kulamo kala gooni gooni ah kula qaatay gudaha Qardho dhinacyo farabadan hadii ay noqon lahaayeen isimo Cuqaal, waxgarad iyo weliba shacab.
Ujeedada ugu weyn ee uu madaxweynuhu u yimi magaalada Qardho ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay xalinta qilaafaad dhowaan gobolka ka soo cusboonaaday oo u dhexeeya laba beel oo wada dega Puntland iyo Arimo kale sida amaanka iyo xasiloonida dalka.